July 2020 – Shwe Thoon 8 Online Media
အမိုက်စားသီချင်းတွေကို သီဆိုလေ့ရှိတဲ့ နာမည်ကျော်အဆိုတော်တစ်လက်ဖြစ်တဲ့ ရွှေထူးကို ပရိသတ်တွေကချစ်ခင်ရင်းနှီးပြီးသားဖြစ်မယ်ထင်ပါတယ်။ ရွှေထူးကတော့ လူငယ်ပရိသတ်တွေအကြိုက် သီချင်းတွေကို သီဆိုလေ့ရှိတာကြောင့် ဂီတလောကမှာအောင်မြင်နေတဲ့အဆိုတော်တစ်လက်ပါပဲနော်။ သူရဲ့ထွက်ရှိသမျှသီချင်းတိုင်းဟာဆိုရင် ပရိသတ်တွေကြားမှာ ရေပန်းစားအောင်မြင်နေတဲ့သီချင်းတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ ရွှေထူးကတော့ ချောမောလှပလွန်းတဲ့ ပရိသတ်တွေရဲ့အချစ်တော်မင်းသမီးချောလေး ရွှေမှုန်ရတီနဲ့အတူ သာယာတဲ့ အိမ်ထောင်ရေးလေးကို တည်ဆောက်ထားတာပါပဲနော်။
သုံးဘီးမောင်းပြီး ကျောင်းထားပေးခဲ့ တဲ့ ဖခင် ကို ဂုဏ်ယူစွာ ထုတ်ဖော်ခဲ့ တဲ့ သွား ဆရာဝန်မလေး ….
…သုံးဘီးမောင်းပြီး ကျောင်းထားပေးခဲ့တဲ့ ဖခင်ကို ဂုဏ်ယူစွာ ထုတ်ဖော်ခဲ့တဲ့ သွားဆရာဝန်မလေး။ လက်ရှိအချိန်မှာ သွားဆရာဝန်တစ်ယောက်အဖြစ် ဘဝလမ်းကြောင်း ဖြောင့်ဖြူးနေပြီဖြစ်တဲ့ အမျိုးသမီး တစ်ယောက်ကတော့ သူမရဲ့ ဖခင် ကို ဂုဏ်ယူစွာနဲ့ ထုတ်ဖော်လိုက်ပါတယ်။ သူမရဲ့ဖခင်ဟာ ညီမဖြစ်သူကိုလည်း ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ဘာသာရပ်နဲ့
….သက်ကြီးထောက်ပံ့ငွေမရသေးတဲ့ အသက်(၁၀၃)နှစ် အဖွားအတွက် တာဝန်ရှိသူများသိရှိစေရန် ………
…ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ ပုသိမ်မြို့ အမှတ်(၁)ရပ်ကွက်၊ ဆင်းသီရိ(၄)လမ်း၏တစ်ဘက် ကျူးကျော်မြေယာမှာနေထိုင်တဲ့ အဖွားဒေါ်ဂေါင်းစိမ်းဟာ အသက် (၁၀၃)နှစ်ရှိနေပြီလို့သိရပြီး နိုင်ငံတော်မှ‌ပေးအပ်သော သက်ကြီးထောက်ပံ့ငွေကို ခုထိမရရှိသေးဘူးလို့ သိရပါတယ်။ အမှတ်(၁)ရပ်ကွက် အုပ်ချုပ်ရေးမှူးနဲ အဲဒီဆင်းသီရိရပ်ကွက်က ရာအိမ်မှူးတွေအနေနဲ့ စီစစ်ပြီးတော့အဖွားရဲ့ရပိုင်ခွင့်တွေကို နိုင်ငံတော်ကိုတင်ပြပေးစေချင်ပါတယ်။ သက်ကြီးထောက်ပံ့ကြေးအတွက်အဖွားကို စာရင်းဘာကြောင့်မကောက်တာလဲဆိုတာ
အဘပုံပါမြင်မြင်ချင်းရှယ်လိုက်ပါ စက္ကန့်တိုင်းဟာသင့်အတွက်ကံကောင်းခြင်းတွေချည်းဖြစ်စေပါလိမ့်မယ် …..
ငွေလိုနေတဲ့သူတွေအတွက် စိုးရိမ်စရာလိုပါဘူး ခက်ခက်ခဲခဲလုပ်စရာမလိုဘဲ သက်တောင့်သက်သားနဲ့ ငွေဝင်လာပါလိမ့်မယ် …အဘပုံကို မြင်မြင်ချင်းရှယ်လုပ်သွား (၃)ရက်အတွင်း ငွေဝင်လာမှာပါ စီးပွားရေးအဆင်မပြေဖြစ်နေသူတွေလဲ ရှယ်သွားပါနော် မိသားစုအဆင်မပြေဖြစ်နေရင်တောင် ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ဖြစ်သွားစေရပါမယ် ကိုယ်တွေ့မို့ပြန်လည်မျှဝေပေးလိုက်တာပါနော်…ကျွန်တော်အဘပုံကို မြင်မြင်ချင်းရှယ်သွားလိုက်တာ ခုဆို စီးပွားရေးတွေလဲအဆင်ပြေ မိသားစုလဲ ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင် နေနိုင်နေပါပြီ..
ကိုဗစ်ကြောင့် ဖြစ်ပေါ်နေ တဲ့ မိဘပြည်သူများ ရဲ့ စီးပွားရေး ကျပ်တည်းမှုကို ဖြေရှင်းနိုင်မဲ့ ထွက်ပေါက် (၃) ….
မန်မာနိုင်ငံရဲ့ စီးပွားရေးထိခိုက်မှုပမာဏက ၂၀၂၀ ခုနှစ် ၆ လ ပိုင်းကနေစပြီး ၁၂ လပိုင်းအတွင်းမှာ တဖြေးဖြေး နဲ့ အလွန်သိသာလာပါလိမ့်မယ် ခင်ဗျာ။ လုပ်ငန်းလည်ပတ်ဖို့ ငွေကို အသဲအသန်လိုလာကြပါလိမ့်မယ်။ ဘဏ်ချေးငွေ မလွယ်ကူတဲ့ ဒီနိုင်ငံအတွက်တော့ ဒီပြဿနာကို
ချစ်မေမေ ရဲ့ အလှအပတွေကိုအမွေ ရထားလို့ မိခင်နဲ့ ချွတ်စွပ်တူပြီး အရမ်း ချစ်စရာကောင်းတဲ့ ဝိုင်းစုခိုင်သိန်း …..
ပရိသတ်တွေချစ်ရတဲ့ အဆိုတော် ဝိုင်းစုခိုင်သိန်းကတော့ အနုပညာအလုပ်တွေကို ဟိုးအရင်ကတည်း ကလုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီး သီချင်းဆိုတာပါအပြင် သရုပ်ဆောင်ပါတော်တဲ့ အနုပညာရှင်တစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ဝိုင်းစုက အခုချိန်မှာဆိုရင် လူကြီးလူငယ်မရွေးကြိုက်နှစ်သက်ကြတဲ့ တေးသံရှင် တစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး သူမသီချင်းတိုင်းကလည်း နားထောင်လို့ကောင်းပါတယ်။လက်ရှိမှာလည်း ဝိုင်းစုက သီချင်းသစ်လေးတွေအတွက် ပြင်ဆင်နေတာဖြစ်ပါတယ်နော်။ဝိုင်းစုရဲ့ချစ်သူအောင်လကလည်း တေးရေး၊တေးဆို တစ်ယောက်ဖြစ်တာကြောင့်
စွန့်ပစ်ခံ မသန်မစွမ်း ခွေးလေးတွေကိုပဲ ခေါ်ယူမွေးထားတဲ့ ဇနီးမောင်နှံ …..
….အခုခေတ်မှာ ကိုယ်ကျိုးစွန့်ပြီး သူများအရေးကို ကူညီတယ်ဆိုတာ မရှိသလောက်ကိုရှားနေပါပြီ။ ဒါပေမဲ့လည်း ဒီဇနီးမောင်နှံတစ်ဦးကတော့ အကူအညီလိုနေတဲ့သူလေးတွေအတွက်ဆိုပြီး သူတို့ရဲ့အိမ်ကြီးကို ပိုက်ဆံတွေထပ်အကုန်ကျခံ ပြင်ဆင်ရင်း နားခိုရာနေရာလေးတစ်ခုအဖြစ် ပြောင်းလဲပေးခဲ့ပါတယ်။ နယူးယောက်၊ Clifton Park မှာနေထိုင်တဲ့ Chris နဲ့ Mariesa
ပိုင်ဖြိုးသုကတော့ ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်ကတည်းက ကလေးသရုပ်ဆောင်တစ်ယောက်အဖြစ် ဇာတ်ကားတော်တော်များများမှာ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီး လက်ရှိအချိန်ထိတိုင် သူမဝါသနာပါတဲ့ အနုပညာအလုပ်တွေကို တစိုက်မတ်မတ် လုပ်ကိုင်နေသူတစ်ယောက် ဖြစ်ပါတယ်။ ပိုင်ဖြိုးသုရဲ့ ညီမလေး နိုင်ဖြိုးဥကတော့ အနုပညာအလုပ်တွေကို မလုပ်ကိုင်ပေမယ့် ပိုင်ဖြိုးသုနဲ့ အမြဲတမ်း တပူးပူးတတွဲတွဲရှိပြီး ချစ်စရာကောင်းတာကြောင့်
ခွဲစိတ်မှုတစ်ခုကို ပြုလုပ်မှာကြောင့် အားလုံးနဲ့ (၂)ပတ်ကြာ အဆက်အသွယ်ပြတ်တောက်သွားမယ့်အကြောင်းကို အသိပေးလာတဲ့ မြတ်ရတနာကျော်..
ချစ်စရာကောင်းတဲ့ ရှမ်းမလေး မြတ်ရတနာကျော်ကတော့ လွှမ်းပိုင်ရဲ့ “တစ်ခါကတက္ကသိုလ်” သီချင်းမှာ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ခဲ့ရင်း ပရိသတ်သတိထားမိခြင်းခံရသူတစ်ယောက် ဖြစ်ပါတယ်။ မြတ်ရတနာကျော်က အဆိုတော် Ah Boy နဲ့ လက်ထပ်ခဲ့ပြီး အခုဆိုရင် ချစ်စရာကောင်းတဲ့ သမီးလေးတစ်ယောက်ကို ပိုင်ဆိုင်ထားပြီပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
မည်သူ့အကူအညီမှ မယူဘဲ သွားလာလှုပ်ရှားနိုင်သလို မိမိဝေယျာဝစ္စ မိမိဘာသာ လုပ်နိုင်ဆဲဖြစ်တဲ့ သက်တော် ၁၀၂နှစ်ရှိဆရာတော်ကြီး …..
.အသက်ရာကျော်ရှည်တယ်ဆိုတဲ့ ဒီဘက်ခေတ်မှာ ရှားသွားပါပြီ…အစားအသောက်အနေအထိုင်ကအစ အင်မတန်ဂရုစိုက်နိုင်မှာ ကျန်းမာသက်ရှည်ကြတာ ဖြစ်ပါတယ်…ခုပြောပြမယ့် ဆရာတော်ကြီးကတော့ သက်တော် ၁၀၂ နှစ်တိုင်အောင် ကျန်းမာလျက်ရှိပြီး သီလပေးတရားတွေကို ဟောကြားပေးနေဆဲဖြစ်ပါတယ်… သက်တော်ရှည်ရခိုင်ဆရာတော် ဦးပညာသာရဟာ သက်တော် ၁၀၂ နှစ် ရှိပြီ ဖြစ်ပြီး